Iindaba - Kwenzeka ntoni ukuba ioyile ye-hydraulic yeyunithi yamandla e-hydraulic ikhethwe ngokungafanelekanga
Kwenzeka ntoni ukuba ioyile ye-hydraulic yeyunithi yamandla e-hydraulic ikhethwe ngokungafanelekanga
Sonke siyazi ukuba i-hydraulic unit iyalingana nomzimba womntu, kwaye ioyile ekhethekileyo ye-hydraulic ye-hydraulic system yeyunithi yamandla alingana negazi lomntu. Ukuba kukho ingxaki ngegazi, liya kuzisa iimeko ezininzi. Namhlanje iYunithi yaMandla e-Huai'an iza kukuxelela ukuba kwenzeka ntoni xa ioyile ye-hydraulic yeyunithi yamandla e-hydraulic ingakhethwanga ngokufanelekileyo?
Njengegazi lomntu, ukuba igazi linengxaki, umzimba womntu awuyi kusebenza kakuhle, kwaye iyunithi yamandla e-hydraulic oyile ye-hydraulic iya kubangela ukusilela okuhlukeneyo kwinkqubo yolawulo lwe-hydraulic yemveliso yeyunithi yamandla ombane. Masiqwalasele la matyala alandelayo kuqala!
I-viscosity yeoyile ye-hydraulic yeyunithi yamandla e-hydraulic ayikho kuluhlu olufanelekileyo. Umzekelo, inkqubo ye-hydraulic kufuneka isetyenziswe phantsi kwe-20-70 degrees Celsius. Nangona kunjalo, ukuba i-VG46 oyile ye-hydraulic ene-viscosity index ye-100 ikhethiwe ngeli xesha, ioyile ikwi-kinematic viscosity kwi-20 degrees Celsius yi-1 34.6 cST.
Ukuba inkqubo ye-hydraulic yeyunithi yamandla ombane isebenzisa i-gesi-engamanzi yokuqhagamshela ngokuthe ngqo, amanzi kunye ne-glycol ayinakusetyenziswa.
Xa kuthelekiswa neoyile yezimbiwa, ioyile eyenziweyo yokwenziwa inobuninzi obuphezulu. Amanzi ane-Refractory yeoyile akanalo nje kuphela uxinano oluphezulu kodwa anomphunga ophezulu, oya kuthi uvelise ukunganyamezeli kokuhamba kweoyile, ke ukuze kuthintelwe impompo ebangela i-cavitation kunye nongcangcazelo, kuya kufuneka uphephe ukusetyenziswa kweoyile enjalo.
Kwizixhobo ezincinci ze-hydraulic ezisetyenziswa phantsi kweemeko zotshintsho olukhulu lobushushu, ukuba uluhlu lwe-viscosity change is 3 times, ukuvuza kuya kutshintsha amaxesha ama-3, okuya kuba nefuthe elikhulu kwinkqubo encinci yokuhamba kwamanzi.
Ke ngoko, umenzi weyunithi yamandla ukhumbuza wonke umntu ukuba xa ukhetha ioyile ye-hydraulic-ulumke ukhethe ngokweemeko zakho zokusebenza ukuze uthintele zonke iintlobo zomonakalo kwinkqubo yesanti.